रमेशको बच्चा खेलाउने कल्पनाको रहर , बिहे सकिए लगत्तै कल्पना मिडियामा किन ? Ramesh Prasai , Kapana - Public 24Khabar
Home Entertainment रमेशको बच्चा खेलाउने कल्पनाको रहर , बिहे सकिए लगत्तै कल्पना मिडियामा किन...
रमेशको बच्चा खेलाउने कल्पनाको रहर , बिहे सकिए लगत्तै कल्पना मिडियामा किन ? Ramesh Prasai , Kapana
हात फुस्रो र कालो छ ? केही दिनमै गोरो बनाउन अपनाउनुहोस् यी उपाय । अनुहारको सुन्दरता कायम राख्न अनेक उपाय अपनाउने कतिपय व्यक्ति हातगोडाको सुन्दरतामा खासै चासो राख्दैनन्। जसले गर्दा अनुहार चम्किलो हुन्छ तर हात फुस्रो र कालो हुँदा त्यो सुन्दरतामा नै फिका हुन्छ।
एकातिर अनुहारको केयर नगर्नु तथा अर्कोतिर घाम र धुलोले डढ्नु र फुट्नु हातको सुन्दरता बिग्रिने कारण बन्छ। तपाईंको पनि अनुहारको तुलनामा हात नराम्रो र कालो भएको छ भने घरमै यि कुराहरु प्रयोग गर्नुहोस तपाईको हातहरु छिटै गोरो र चम्किलो हुनेछ। अनुहारको सुन्दरता कायम राख्न अनेक उपाय अपनाउने कतिपय व्यक्ति हातगोडाको सुन्दरतामा खासै चासो राख्दैनन्। जसले गर्दा अनुहार चम्किलो हुन्छ तर हात फुस्रो र कालो हुँदा त्यो सुन्दरतामा नै फिका हुन्छ।
एकातिर अनुहारको केयर नगर्नु तथा अर्कोतिर घाम र धुलोले डढ्नु र फुट्नु हातको सुन्दरता बिग्रिने कारण बन्छ। तपाईंको पनि अनुहारको तुलनामा हात नराम्रो र कालो भएको छ भने घरमै यि कुराहरु प्रयोग गर्नुहोस तपाईको हातहरु छिटै गोरो र चम्किलो हुनेछ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
हातको छालाको रंग सफा गर्न तथा चम्किलो बनाउन काँचो दूध निकै राम्रो हुन्छ। काँचो दूधले हातको छालामा मसाज गर्नाले, केही दिनमै हात गोरो र सुन्दर देखिन थाल्छ।
कागतीमा सिट्रिक एसिड पाइन्छ, जसले छालामा रहेको कालोपत्रलाई सफा गरिदिन्छ। कागतीको टुक्रालाई हातमा रगड्नुहोस्, छालाको रंग उज्यालो बन्छ। कागतीको रसमा नुन र सक्खर मिलाएर ‘स्क्रब’ गर्नु अझ राम्रो हुन्छ।
काँचो आलुको रस निकालेर हातमा लगाउने । लगभग २० मिनेटसम्म यसलाई हातमै रहन दिने र पछि पानीले धुने । एक हप्तामा दुई–तीनपटक यसो गर्दा हात उजेलिन थाल्छ।
Previous articleधमाधम चिनियाँ मोडेलमा हुँदै नेपालको विकास, चीनले दियो राम्रो साथ,आयो अत्यन्तै खुशीको खबर !!!
Next articleअन्तत: नेपाल र भारतबीच कुरा मिल्यो, बन्यो यस्तो सहमति ! सम्झौता संशोधन गर्न भारत सहमत